Ukulala, imeko yengqondo
Kubantu, malunga ne-1/3 yobomi buwela ephupheni, imeko yengqondo apho kude kube ngoko oososayensi abazange bafunde. Kwabaninzi, le nto inomdla - kwenzeka ntoni ephupheni kwaye kutheni umzimba uphunyulelwa imihla ngemihla. Iphupha lomntu linamalungu amabini - isigaba esicothayo kunye nokukhawuleza. Iingcali zenzululwazi ziye zabonisa ukuba ubuchopho bomntu sisasebenza ngexesha lokulala.
Iphupha liyimfihlelo yendalo.
Ubuthongo obuphantsi buhlukaniswe ngamanyathelo athile. Unoxanduva lokubuyiselwa kwamandla omzimba. Xa umntu elele, isigaba sokuqala sokulala okuphucayo siqala. Iiseli zesintu zifikelela kwibhalansi enkulu xa isigaba sesibini sokulala sifaka. Kuthatha ixesha eliphambili lokulala. Kule meko, i-optimal state of relaxation isetha kuyo. Eli nqanaba lihamba kancane libe ligaba lesithathu nelesine, ukuthetha ngokuchanekileyo, kubuthongo obukhulu.
Ukulala okuncinci kuhamba kancane ngokukhawuleza. Kule ngingqi yengqondo, ubuthongo bunembopheleleko yokubuyisela impilo yethu yengqondo. Kulo xesha sibheka amaphupha. Ngethuba lesigaba sokukhawuleza, inkqubo ye-nervous is activated suddenly, ukuphefumula kunye ne-pulse kuyaphiliswa, ngoko yonke into ibuyiselwa. Akukho mntu unokunika inkcazo kule nkcazo. Umntu uchitha ixesha elide kwisigaba sokulala ngokukhawuleza, ukuba uhlushwa yiingxaki ezingaxilwanga. Ukulala ngokukhawuleza kubangela imemori.
Iingcamango, ngokweengcamango ze-somnologists, ziimeko ezikhethekileyo zeengqondo. Ziyabonwa ngabantu bonke, kodwa kukho abo bavuka ngokukhawuleza bayalibala. Akukho bani oza kunika impendulo ethembekileyo kumbuzo, kutheni amaphupha ayadingeka. Kukholelwa ukuba oku kuyimpembelelo ecaleni yomsebenzi wengqondo. Ngethuba lamaphupha ethu angakwazi ukudibanisa nathi kwaye anike imiqondiso ethile, emele ilandelwe. Zininzi iintlobo zamaphupha azivelele kwi-somnologists.
Eyona maphupha awona maphupha abonisa izihlandlo ezikhunjulwayo ebomini. Amaphupha okudala amaphupha apho ungabona kubaluleke kakhulu ongayifumani ngaphambili (i-table yesikhewu esenziwa nguMendeleev ngaye). Umbuso womzimba wakho ubonakaliswa kumaphupha okuphila. Umzekelo, ukuba ushushu, ngoko unokuzibona ephupheni kwigumbi elitshisayo, ukuba kubanda, ngoko ke, xa uphupha into ephazamisayo, kufuneka uyibeke ingqalelo kuyo, njl. Xa sibona amaphupha esiwaphumelelayo abachasi, uzuze ithikithi yeLottery okanye uvale amazwi malunga nothando, ke oku kubuthwa ukuhlawula.
Xa umntu enganelisekanga, ubuthongo buya kuba buhlungu. Ngokuqhelekileyo izibambiso zobusuku zibonwa ngabantu abanengqondo engalinganiyo. Iimbangela zeendlobongela zizinto ezininzi. Ngokomzekelo, ngokuphindaphindiweyo ubumnyama bubonakala ngumntu onenkathazo engqondweni engaphendululwanga, eyadla ngaphambi kokulala, owayetywala utywala ngosuku olulandelayo. Isizathu seendlobongela ziyakunqandwa ngokukhawuleza nayiphi na imikhwa, ukupheliswa kwamachiza athathwe ixesha elide, njalo njalo. Ukuphupha kuyimfihlakalo kumntu wonke, kwaye akukho mntu unokunika inkcazo ecacileyo kuyo nayiphina amaphupha.
Ukungabikho kokulala kokulala.
Ukungabikho kwimeko yokulala kwengqondo ngokucacileyo akuphuculanga. Ukungabikho kokulala kudala kubangela ukudandatheka. Ukuba umntu akafumani ukulala ngokwaneleyo, ubuchule bakhe bengqondo buncitshisiwe, unonophelo lulahleka. Ngethuba lemini, iiprotheyini ezikhethekileyo ziqokelelwe kwingqondo, eziyimfuneko yokudluliselwa kweempembelelo zesibindi phakathi kweeseli. Xa singalali, iiprotheni "zivale" ingqondo kwaye ziphazamise ukuhamba kwimiqondiso. Ukulala okubi akukuvumeli ukuba ulahle umkhwa omubi wokutshaya. Lo mkhuba, ungaphazamisa ubuthongo obuhle. Emzimbeni womntu ngobusuku, inqanaba le-nicotine linciphisa kwaye lenza ubuthongo buphakathi.
Umkhwa wokulala ixesha elide unobungozi, njengokungabikho kokulala. Iingcali zenzululwazi ziye zafakazela ukuba bobabini abangakwazi ukulala ngokwaneleyo kunye nalabo abalele ngokuphindaphindiweyo kabini banomngcipheko wokufa ngaphambi kokufa. Ngokomyinge, umntu kufuneka alale malunga neeyure eziyi-8 ngosuku.
Ukuveliswa kwamahomoni ambalwa ebalulekileyo emzimbeni wethu inxulumene nobuthongo. Ngenxa yoko - ukungabikho kokulala kungonakalisa impilo yethu. Ukufika kwi-70% ye-melatonin iveliswa ngexesha lokulala. UMelatonin ukhusela umzimba ekuguga kwangaphambili, kwiinkxalabo ezahlukeneyo, kuthintela umdlavuza, kwaye kwandise umkhuhlane. Ukungabi nobuthongo kubangela ukunciphisa kwimveliso ye-hormone yokukhula (hormone yokukhula), elawula isenzo senkqubo ye-nervous, ephucula inkqubo yokuguga, ithuthukise imemori. Emva kweeyure ezingama-2-3 emva kokulala ubuthongo, ubunzima bokuveliswa kwalo buya kwenzeka. Nabani na ofuna ukunciphisa umzimba kufuneka alungise ukulala kwabo. UGréleen - uxanduva lokutya, kunye neptin - ngomqondo wokugcwalisa. Ukwandisa ukutya kwabo bantu abangalali.
Iingcebiso zokulala kakuhle.
Ukulala ubusuku obuhle, sebenzisa ezinye iingcebiso. Ukuzivocavoca kulula ngaphambi kokuba ulale embhedeni kuya kunceda ukuyenza ibe yomelele. Susa ukukhutshwa komzimba. Ungadli ishokoledi ngaphambi kokulala kwaye ungaphuzi ikhofi. Ezi mveliso ziqulethe izinto ezixhamlayo. Iqondo lokushisa kwigumbi apho ulala khona kufuneka libe phakathi kwama-degrees 18 no-24. Zama ukulala ngexesha elifanayo, ukuba kunokwenzeka. Musa ukubukela iTV ixesha elide ngaphambi kokulala kwaye ungathathi ikhompyutha yakho ukuba ulale. Lo mkhuba wenza ukuba ingqondo idibanise umbhede ngokuvuka. Yiba nobuthongo obuhle kunye obuhle!
Ukuphulukisa iipropati ze-dandelion kunye ne-plantain
Ukusetyenziswa kweerisi ezibalulekileyo zeoli
Iimpawu zonyango kunye nemilingo ye-coral
Umhlaza wesifuba, isifo esibuhlungu
Ziziphi ii-parasites eziyingozi emzimbeni womntu?
I-Multiple sclerosis: unyango olungezinye
Ezempilo, ulutsha nobuhle
Ukunyanga kwesikhumba seoli kunye namafutha abalulekileyo
Udokotela uVladislav Galkin
Kuthekani ukuba abazali bakho bangakuthandi?
U-Olga Buzova wagqiba kwi-photo shot shoot and changes
Amanyathelo okuphuhlisa intetho yabantwana
Izinwele ezihle kakuhle
Jam kusuka kwiginki kunye nemon
Kuthekani ukuba indoda yam ishiye enye
Ubungakanani bumnandi: iingubo ezimnandi zizele ngokupheleleyo ngoNyaka omtsha 2016
Iimodeli ezona zidumileyo zaseRashiya
Ukuphuma kwegazi kumntwana
Yintoni enokuyenza kwaye ayikwazi ukuxelela umhlobo
Ngaba kufanelekile ukuxhalaba xa unina wayefike ephupheni
Kwaye ndithandana nomtshato
Ubomi bentsapho kwintsapho yaseSweden
Indlela yokukhetha iimpahla ezifanelekileyo kubantwana